Hevitra momba ny iOS ho an'ny iPad misy mpitantana varavarankely | Vaovao IPhone
iOS 9 dia nitondra ny fahaizany mizara ny efijery iPad. Rehefa ao anaty rindranasa iray isika dia afaka mivezivezy avy eo amin'ny zoro ankavanana mba hisehoan'ny fampiharana (Slide Over). Raha tadiavintsika dia azontsika atao ny mamela ity rindranasa ity hipetraka ao amin'io tsipika io na hizara roa ny efijery (Split View). Etsy ankilany, azontsika atao koa ny mametraka horonantsary mitsingevana, izay fantatra amin'ny hoe Picture-in-Picture. Ireo rehetra ireo dia mbola mety ho fantatry ny kely, ka Steve Troughton-Smith dia namorona hevitra a iOS ho an'ny iPad miaraka amin'ny manager windows.
El foto-kevitra Troughton-Smith dia tsy ho zava-baovao ho anao raha mpampiasa OS X. Araka ny hitanao amin'ity horonantsary manaraka ity, ny fitaratra dia manana varavarankely telo amin'ny efijery iPad, izy rehetra dia azo averina resy amin'ny ankavia sy havanana ary amin'ny farany ambany. , zavatra izay eritreretintsika avy amin'ireo andalana eo amin'ny sisin'ny sisiny ahafahantsika manova ny haben'ny isam-baravarankely, ny tsipika sasany izay eo amin'ny efijery hidin-trano hidirana amin'ny Control Center sy ny Notification Center.
bokotra hanidy sy hampitombo ny varavarankely toa lehibe kokoa noho ny amin'ny OS X izy ireo, izay mety noho ny haben'ny rafitra fikirakirana ny birao. Mety ho fanamorana kokoa ny fikasihan'izy ireo amin'ny rantsan-tànanao koa izany.
Ny marina dia ny efijery fisarahana mamela antsika hamokatra bebe kokoa. Na dia marina aza fa mety tsy ilaina ny hitovizan'ny fikandrana amin'ny an'ny OS X, marina ihany koa fa ny famerana an'io karazana fiasa io amin'ny fampiharana roa dia toa tsy dia fohy loatra, zavatra hita be kokoa ao amin'ny rafitry ny birao. Heveriko fa tsy izany no ataon'i Apple amin'ny iOS, fa maninona aho no tsy afaka mizara ny efijery mba hampisehoana fampiharana efatra farafaharatsiny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Hevitra momba ny iOS ho an'ny iPad miaraka amin'ny manager windows
Mini dia hoy izy:
Novakiany ny baoliny hanaovana ilay foto-kevitra ... Tsy ho tonga tao an-tsaiko mihitsy izany.
Mamaly an'i mini
Manampy ny fiasa Panorama sy ny Time-Lapse amin'ny menio 3D Touch (Jailbreak) an'ny fakantsary.
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny taona - Juan Colilla